သင်ကသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်အွန်လိုင်း Buy သင့်တယ်? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > သင်ကသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်အွန်လိုင်း Buy သင့်တယ်?
ဒီ post မှာတော့, ကျနော်တို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်. အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ခရီးသွားများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အခိုက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လေ့. ရထားလက်မှတ်တွေနောက်ဆုံးမိနစ် booking လုပ်ဖို့ပညာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး.
တခါတလေ အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ် booking, သင့်ရဲ့ခရီးသွားများအတွက်လက်မှတ်များ၏အပေးအယူများနှင့်စွဲချက်အကြောင်းအသေးစိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကမ်းလှမ်း. လက်မှတ်တွေပုံမှန်အားဖြင့်ရထားပေါ်တွင်ထုတ်ပေးနေကြ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်း၏. အကယ်. သင်က ကြောင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ခရီးသွားလာ နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ, ပြီးနောက်သင်ကမ်းလှမ်းမှုအတူပါလာသည်ဟုလက်မှတ်များဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်.
peak နာရီ ခရီးသွား
သငျသညျပုံမှန်သွားလာဒေသခံရထားအသုံးပြုလျှင်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးလက်မှတ်မပါဘဲခရီးသွားလာများ၏အန္တရာယ်ကောင်းစွာသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုလစဉ် 'passes အသုံးပြုချင်မည်သည့်အခါဤသူကားအ. တစ်ဦးက လစဉ် pass သငျသညျဒေသခံတစ်ဦးရထားပေါ်တွင်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲခရီးသွားလာနိုင်သည်ကိုသေချာ.
သငျသညျကိုကြိုတင်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်အလိုသော်လည်း, ရာသီ၏သဘောသဘာဝကြောင့်, ticketless ခရီးသွားများအတွက် မြင့်မားသောခြောက်သွေ့သင်တို့ရှိသမျှကိုစွအခန်းအတွက်နေရာတိုင်းပေါ်လာလေ့.
ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ပညာရှိသောလမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် off-ရာသီအတွင်းခရီးသွား. အဆိုပါ Off-ရာသီမဟုတ်တဲ့အတိုကောက်-ပွဲတော် ရှည်ကြာခြင်း. ဖေဖော်ဝါရီလလ-ဧပြီလ နှင့်ဇွန်လ-အောက်တိုဘာလတစ်ခု Off-ရာသီအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်. ခရီးသွားများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့မလုပ်ကြပါဘူး ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်.
Lecce Florence မှရထား
ကြိုတင်ဘွတ်ကင် - ကောင်းမကောင်းဖြစ်ပါသည်?
နာမတျောအဝင်အဖြစ်, ကြိုတင်ဘွတ်ကင်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် အွန်လိုင်း. သငျသညျကိုကြိုတင်သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါ, သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုအတည်ပြု. ထည့်မပြောပါနှင့်, အဆိုပါလက်မှတ်များအများကြီးကုန်ကျပါဘူး.
သငျသညျရှေ့ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်မှလအနည်းငယ်အကြားဖြစ်ကြပြီးကတည်းက, ဒါကြောင့်စျေးသက်သက်သာသာအလုပ်လုပ်သည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအဆင့်မြင့်ဘွတ်ကင်နောက်ပိုင်းမှာမပြောင်းနိုင်ကြောင်းသိလိုပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, ကြိုတင်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြိုတင်ကစာအုပ်ဆိုင်.
သငျသညျအချိန်မရွေးလက်မှတ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်ချင်တယ်အခါတိုင်းသင်သည်ထိုသူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်နိုင်သည်ကိုသိရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်. သူတို့နှင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လက်မှတ်အကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သင်သာခရီးသွားများ၏နေ့၌အချိန်မရွေးလက်မှတ်တွေကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်း.
သို့သျောလညျး, သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်နှငျ့သငျရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရီးသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်သည့်အခါ, ထို့နောက်သူကအွန်လိုင်းကတဆင့်ပြည်တွင်းရထားလက်မှတ်စာအုပ်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်အမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့အပျေါသို့ချဉ်းကပ်နိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကရထားဝက်ဘ်ဆိုက် Save သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ကိုသုံးပါ ရထားလက်မှတ်အကူအညီသည် Facebook မှ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/when-you-should-do-your-local-train-ticket-booking-online/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml သင် / ရန် / ja ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#ဒေသဆိုင်ရာ #localtrain #localtrains #ချစ်သူ မီးရထားလက်မှတ်